Ugu yaraan 32,000 oo kenyaan ah oo sannad kasta u dhinta cudurka Kansarka – The Voice of Northeastern Kenya
Ugu yaraan 32,000 oo kenyaan ah oo sannad kasta u dhinta cudurka Kansarka
Star FM October 16, 2018
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in cudurka kansarka uu sannad waliba galaafto noolosha in ka badan 32,000 oo qof oo Kenyaan ah.
Marka la eego bariga Afrika, Kenya ayaa laga soo tabiyaa kiisaska ugu badan ee kansarka oo ah boqolkiba 39 kuwa laga diiwangeliyo gudaha wadamada kala ah Kenya , Ugandha iyo Tanzania oo gaaraya 122,564 kiis .
Waxaa Kenya soo raacda Tanzania oo sida laga soo xigtay WHO laga soo tabiyo 42,060 kiis halka Ugandha ay tahay 32,617.
Sannad kasta waxay dowlada diiwaangelisaa kiisas cusub oo gaaraya 47,887.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa dhanka kale warbixin ay soo saartay shaaca uga qaaday in sannad kasta qiyaastii 10 kun oo kenyaan ah ay dibadda u raadsadaan daryeel caafimaad oo ka dhan ah xanuunkan.
Tallabadaasi ayaa waxaa ku baxa ugu yaraan 10 bilyan oo shilin hadana caqabadda ka jirta gobolka ayaa ah inay yartahay tirada howladeenada caafimaadka ee ku takhasusay la tacaalidda xanuunkan.
Nooca kansarka ee ku dhaca dhuunta ayaa ah midka ugu badan gudaha dalka iyadoo sannad waliba la diiwaangeliyo 4,351 qof oo uu soo ritay.
Dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay degaanka Juja ee ismaamulka Kiambu Francis Munyua Waititu ayaa sheegay in 63 siyaasiyiin ah oo ka tirsan baarlamaanka iyo aqalka sare ay qabaan cudurka kansarka.
← Google introduces Motorbike Mode navigation in Kenya
Guddoomiyaasha xaafadaha oo loo tababarayo sida militariga dalka →